Misaona ny famonoana ilay mpanao gazety Espaniola tany Burkina Faso ireo mpanao gazety mpitatitra ady · Global Voices teny Malagasy
Nitombo hatramin'ny fanonganam-panjakana taona 2015 ny ady nifanaovan'ireo vondrona jihadista
Nandika (en) i Allison Janos
Voadika ny 19 Jona 2021 4:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, Français, Swahili, Español
David Beriain. Sary avy amin'ny TEDx UniversidaddeNavarra tao amin'ny Flickr. (CC BY 2.0)
Misaona ny famonoana an-dry David Beriain sy Roberto Fraile, mpanangom-baovao momba ny ady tany Burkina Faso, tamin'ny 27 Aprily ny asa fanaovan-gazety mpitatitra ady Espaniola. Vao haingana izy roalahy ireo no nahazo fankasitrahana avy amin'ny namany sy tamin'ny National Press Club (Klioban'ny Gazety Nasionaly), izay nanolotra azy ireo ny Loka Iraisam-pirenena ho amin'ny Asa Fanaovan-gazety noho ny asany amin'ny maha mpanangom-baovao iraisam-pirenena azy ireo.
Nitatitra ireo fifandonana mitam-piadiana lehibe tany Sodàna, Afghanistan, ary Iràka i Beriain. Namoaka tatitra marobe momba ny kolikoly any Arzantina, ny fanondranana zava-mahadomelina ary ny ady tany Kolombia ihany koa izy. Fraile indray dia fantatra amin'ny asany amin'ny maha-mpaka sary azy ao Aleppo, Syria, izay naharatrany mafy teo am-pakana sary ireo miaramila mpikomy. Nitatitra ireo fifandonana mitam-piadiana isankarazany tany Libya, Iraka, ary Kosovo ihany koa i Fraile. Nanao tatitra momba ny fihazana antsokosoko tany Burkina Faso izy ireo no maty novonoina.
Nosamborina tany atsinanan'ny firenena ireo mpanao gazety, faritra iray izay nipoiran'ny fihenjanana sy ny tsy fandriam-pahalemana noho ny vondrona jihadista hatramin'ny nandraisan'i Roch Marc Christian Kaboré fahefana tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2015. Tsy natao tamin'ny vahoaka sivily ihany ny fanafihana fa tamin'ireo vondrona mpampihorohoro ihany koa. Anisan'ireo vondrona ireo ny Al Qaeda, ny Vondrona ho an'ny Fanohanana ny Islamo sy ny Miozolomana (JNIM), ny Fanjakana Islamika any Sahara Lehibe (ISGS), ary ny Ansarul Islam.
Manampy trotraka an'io olana io ny fahantran'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, izay mivelona amin'ny fambolena ny 80% ary matetika no lasibatry ny fanafihana ataon'ireto fikambanan-jiolahy ireto.
Mampihorohoro ireo mpanao gazety avy amin'ny firenena Afrikana ity andiana herisetra ity, izay voafetra rehefa mandeha mamita ny asa fanaovan-gazety ataon'izy ireo. Toy izany ihany koa, maro no mijaly any am-ponja sy voampanga tamin'ny fanalam-baraka rehefa nitatitra momba ny toe-draharaha any Burkina Faso.
Ny Vondrona ho an'ny fanohanana ny Islamo sy ny Miozolomana (JNIM) no tompon'andrakitra tamin'ny famonoana ireo mpanao gazety Espaniola roa, hoy ny Minisitry ny Fiarovana Espaniola, Margarita Robles. Niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ny ONG Chengeta Wildlife, ary ny fisafoana iraisan'ny tafika avy any Burkina Faso i Beriain sy Fraile. Araka ny fanadihadiana nataon'ny gazety Espaniola El Pais, dia voahodidina ny vondrona rehefa niditra tao amin'ny toby Al Qaeda, ary notifirina ho faty ireo tafajabaka.
Fraile no voalohany voatifitra, ary Beriain sy Rory Young, mpiaro ny tontolo iainana Irlandey sady mpanorina ny Chengeta Wildlife dia nandà ny handao ny naman'izy ireo. Araka ny fanadihadiana, tokony voavonjy tamin'ny fanafihana i Beriain saingy tsy nety nandao an'i Fraile, izay naratra mafy izy.
Ny zoma 30 aprily no tonga tao Madrid, Espaina tamin'ny fiaramanidina miaramila avy any Burkina Faso ny vatan'ireo mpanao gazety maty.
Maro ireo faritra aty Afrika no tena mampidi-doza ho an'ny mpanao gazety, izay efa nahitana famonoana mpanao gazety miisa zato mahery taty amin'ny kaontinanta Afrikana tao anatin'ny folo taona. Araka ny fanamarihan'ny Reporters Sans Frontières, na eo aza ny fiafaran'ny fitondrana didy jadona tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia mbola asa andalam-pivoarana ny tsy fanasaziana ny asa fanaovan-gazety sy ny fanamafisana ny fiarovana ny mpanao gazety.
Mitana ny laharana faha 37 i Burkina Faso amin'ny Fanomezana Laharana Erantany Momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety taona 2021 nataon'ireo Reporters Without Borders, ao anatin'izany ny famonoana an'i Beriain sy Fraile izay hany maty tamin'ity taona ity tao amin'ny firenena Afrikana. Mifanohitra amin'izany, mitana ny laharana faha 173 ny fanjakana toa an'i Syria, any amin'ny faha 132 i Palestina, ary faha 165 i Libya.
Maneran-tany, mpanao gazety iraika ambin'ny folo sy mpiara-miasa olon-tsotra miisa efatra no maty tamin'ity taona ity, ary mpanao gazety miisa 324 hafa, mpanao gazety olon-tsotra miisa 102, ary mpiara-miasa miisa 13 no nogadraina.
Ny tahotra, ny fampijaliana, ny fakana ankeriny ary ny fahafatesana no anisan'ny voka-dratsin'ity asa ity, araka ny nambaran'ilay mpitati-baovao, mpanatontosa sarimihetsika sady mpanoratra Hernán Zin tamin'ny fanadihadiana nataony tamin'ny taona taona 2018 “Morir para Contar” (Milaza mba ho Faty), izay samy nahitana an'i Beriain sy Fraile. Samy iharan'izany vokany izany ireo mpanao gazety mpitatitra ady sy ireo mpanao gazety an-tsary, saingy ny tanjon'izy ireo dia ny hampahafantatra ny marina sy ny tolona hanovana izao tontolo izao.
Ao amin'ilay fanadihadiana, nidera ny fitiavana voarainy avy amin'ny namany sy ny fianakaviany i Beriain sy ny fahafahany manao an'io asa io, araka ny fiteniny manokana hoe “an- kalalahana“, izay milaza fa efa nandindona ilay mpanao gazety ny fanambarana loza amin'ny fiafarany.
Etiopia 04 Janoary 2020
Eoropa Andrefana 17 Febroary 2019